Mgbe ụgwọ Ọrụ Ugbo gasịrị - Gini mere CBD Mmanụ ji bụrụ "iwu" na steeti 50 niile?
Iwu CBD mmanụ bụ iwu na steeti iri ise niile?
Ngwakọta CBD bụ Iwu kemgbe 2018 Farm Bill na December 2018
CBD Mmanụ abaala ebe niile na ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na ọ bụ ihe iwu kwadoro na steeti iri ise niile
Ndewo, Abụ m ọka iwu ụlọ ọrụ cannabis na-aza gị ajuju iwu igbo ka ị nwee ike ịhazi iwu gbasara wii wii. Ma taa anyị ajụọla ajụjụ dị mma site n'aka onye na-ekiri ogologo oge na nwa okorobịa niile dị egwu. Anyị ga-abata n'eziokwu ahụ n'oge adịghị anya.
Mana buru ụzọ, ị ga-achọ ịnọgidesi ike ruo na njedebe n'ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ka m tụdara ma tụda ihe osise Richard Nixon na-asọ oyi.
Mana tupu anyị erute ajụjụ nke taa, gaa n'ihu ma hapụ nke gị n'ihe ndị a. Enweghị m ike ịza ajụjụ gị ọ gwụla ma ị jụrụ. Ma mgbe ị na-agbada ebe ahụ, nye anyị ihe anyị na-eme.
Ajuju nke taa sitere na JX Fit, ma jua ya si, “otutu ulo oru na ekwu na ha na enyefe ahihia hekoropu nke CBD na steeti iri ise niile, nke a bu ihe iwu zuru oke nihi na o nwere erughi 50% THC ma o bughi site na osisi igbo. O sitere n’osisi hemp. Iwu ọ kwadoro?"
Nnukwu ajụjụ. Na ịmalite, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị ga-ekpuchi ma iwu gọọmentị etiti na steeti, mgbe ahụ anyị ga na-ekwu maka ntakịrị akụ na ụba, ntakịrị nke azụmaahịa 101.
Gee ya nti na PodCast ma obu Lelee YouTube na bụ cbd mmanụ iwu na steeti iri ise niile
EBIGBO EGO: Onye ọka iwu Maryland Cannabis
CBD aburula nke oma ebe otutu, otutu ndi mmadu n’etinye ndu ha ihe ma buru ndi ahia ma na ere ire CBD ndia.
Anọ m na-agwa nwanne m okwu. Ọ na-enye CBD mmanụ nkịta ya. May nwekwara ike inye nkịta CBD nkịta gị. O doghi m anya.
Ọ bụ iwu? N’ezie, ọtụtụ steeti, ọtụtụ, ọtụtụ steeti ahụla ìhè mgbe ọ batara na CBD na nyocha ọgwụ niile nke na-aga n’ihu ịchịkọta uru ya, anyị agaghị na-atụle uru CBD ga-enweta taa, ma anyị ga- na-ekwu maka steeti 46 ndị mezuru ụfọdụ ụdị marijuana ọgwụ ma ọ bụ mmanụ CBD maka iji ọgwụ.
N’ezie, enwere steeti anọ emebebeghị iwu CBD na-akwadobe iwu, steeti anọ ndị ahụ bụ Idaho, South Dakota, Kansas, na n’ezie, Nebraska.
Ehee, echere m na ha chọrọ iwu gọọmentị etiti nke bụ Njikwa Ihe Nchịkwa, nke bụ otu n'ime ihe kpatara anyị ga - eji bibie foto a Richard Nixon ma emechaa. Iwu a na-achịkwa nke nwere ike ị nweta cannabis niile bụ usoro nhazi otu ihe, nke n'ezie ịgụnye hemp. Hemp, ka o na-etolite n’ọhịa, dị ka n’okpuru ndị Njikwa Ihe Omume mmachi dị ka mkpụrụ ndụ ndị ọzọ.
Chee echiche banyere nke ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eto cannabis maka ebumnuche ọgwụ, ọ bụ okooko osisi, ị ga-ewu ya n'ụzọ dị iche karịa ma ọ bụrụ na ị na-eto hemp maka ngwaahịa ya, eriri ya, ma ọ bụ ọbụlagọnarị ya Mkpụrụ, nke ga-ezuru oke ụtọ, anapụlarịrị maka Iwu Nchịkwa.
Yabụ na mgbe ị gara na Costco wee zụta onwe gị nnukwu obi ahụ na-ama jijiji, obi ị ga - enweta obi hemp niile, ndị ị ga - ahụ n'ụlọ ahịa gị, ha nọ ebe ahụ n'ihi na ewepụrụ ha kpọmkwem na ndị a na - achịkwa Ihe ndi ozo.
Dịka a ga-ewepụpụ eriri ma ọ bụ ụdọ ahụ, ma ọ bụ ehi, hempherds, ngwaahịa dị na ya, nke nwere njiri ụlọ ọrụ aka maka ya.
Kedụ ka ha ga-esi kwuo na ọ bụ site na hemp na ya mere esiri pụọ? Ha enweghị ike. Ma eleghị anya, ha na-eche ihe na-abịa.
Eleghi anya ha na-anwa iru ahia. Anyị ga-ekwu banyere ihe achụmnta ego ebe a na ntakịrị. Nke mbu, anyi ga aga ije na aka anyi site na iwu etiti na mgbanwe ochichi etiti na hemp.
Abụ m onye Illinois. N'oge na-adịbeghị anya, ụnyaahụ n'eziokwu, Bruce Rounder bịanyere aka na ya Mmemme nke pilo nke Illinois, yabụ anyị nwere ike bido inye ndị ọrụ ugbo nọ na steeti ndụmọdụ maka etu ha ga - esi zụlite hemp dị ka ụdị mkpụrụ ọzọ ga - agbanwe
Thegwọ ịkọ ugbo agbadatabeghị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa na ị nwere ike ịgbaso akụkọ banyere ụgwọ ugbo site na hashtag #FarmBillFriday, ị ga - enweta mmelite site na Congress maka ụgwọ ọrụ ugbo nke nwere asụsụ iwu ịgba hemp. itinye na ụgwọ site n’aka Senator McConnell si Kentucky. Ọ malitere usoro ịnya ụgbọ elu hemp na ọkwa gọọmentị afọ ole na ole laa azụ, nke ahụ na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ugbu a, anyị nwere ụgwọ ọrụ ugbo ahụbeghị.
Farm Bill gafere na CBD Hemp ghọrọ iwu gọọmentị etiti na December 2018.
Ka anyị kwuo n'ụzọ akụ na ụba ihe kpatara nkwupụta onye a. N'ihi na m bụ ọkàiwu cannabis kachasị mma na enwere. Nke ahụ bụ ihe anyị kpọrọ iwu, puffery. Agbanyeghị, mgbe mgbe ị na-ekwu ihe iwu kwadoro, ị naghị ekwu n'ezie na ọ kachasị mma. N'ihi na mgbe ị na-ekwu ihe kacha mma, ọ bụ ihe ruru eru.
Hemp “Kachasị mma” nwere ike ịbụ mgbasa ozi.
Ọ kachasị gị mma. Ọ bụrụ na m na-ege Miles Davis, echere m na ọ bụ onye ọkpụkpọ mpi ka mma karịa John Coltrane, nke ahụ bụ naanị arụmarụ ụka gbasara ihe masịrị m karịa ihe masịrị gị. Nke m kachasị mma.
Iwu bụkarịrị obere nkụ na nkụ. Onwebeghi iwu kachasị mma. Can nwere ike ịsị na ị bụ ọkàiwu kachasị mma, mana ọnweghị nke ọma, bụ iwu a, nke ahụ na - abụkarị nke ee / ee e. Ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ ọ bụla ebe ọ ga-esiri gị ike ịza, ọ bụ ya ụlọ ọrụ cannabis, n'ihi na onweghị azịza ọ bụla n'ezie ee / ee e nweghị azịza gbasara iwu cannabis na CBD mmanụ si na ifuru hemp pụta, nke na-eme ọtụtụ uche.
Mgbe ahụ ọ jụrụ banyere 0.3%. Ifuru osisi hemp na-enwekarị CBD nwere ya, mana obere THC pere mpe. Si otú ọ dị. Amaghị m. Ana m agwa gị, ka ị na-amụkwu banyere gọọmentị etiti na iwu cannabis niile, ka ị na-adịkwu ka, nke ọma nwere ike iji akwụkwọ iwu mee ihe dị ka okwu na-emegide ya na ọnụọgụ abụọ ee / enweghị azịza ọ bụla.
Kedu ihe enweghị iwu nke CBD site na nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ pụtara azụmahịa?
Yabụ ọ bụrụ na m bụ ọchụnta ego ma enwere m ike ịme ọtụtụ jaak na-ere mmanụ CBD, ana m elele data ahụ, ahụrụ m na CBD na-ewu ewu nke ukwuu, ọ bụ iwu na steeti 46, ọ bụ iwu na ọkwa gọọmentị , n'ihi na ikekwe ị nwere ike ikwu na ọ bụ wii wii ọgwụ, mana ọ bụrụ na ị na-ekwu na nke gị sitere na hemp, ị na-eche ụgwọ maka ịkọ ugbo.
Ugbu a, mmadụ ọ bụla emeela ihe ọ bụla? Ee, FDA zigara ụfọdụ akwụkwọ ozi CBD na ntanetị ụfọdụ na 2015 na 2016, wee zụta ụfọdụ nkwụsị na ọnaghị aka, mana ahụbeghị m onye ọ bụla enwetara, jide ya n'aka, ma mechie azụmahịa ndị CBD ya. Ma eleghị anya, nke ahụ bụ ihe ha na-ekwu. N'ihi na iwu dị mma dị ka ego ole ndị mmadụ ga-eji kwado ya. Enwere m ike ikwu na ịgba ọsọ ọsọ bụ 70 kilomita n'otu awa, ọ bụrụ na ọ nweghị onye ga-abụ gọvanọ na-ekwu na 70 kilomita n'otu awa, ịgba ọsọ ahụ bụ ihe ọ bụla, ọ dị mma?
So Jeff Session emechiela ihe ọ bụla. N'ihi gịnị? Enwere ntuli aka na Nọvemba, mana ikekwe na ha ma na echiche ọha bụ nke nwere otu akụkụ, ha makwaara na #FarmBillFriday na-agbadata, ha makwa na 46 steeti emebela iwu a, ha kwenyere, ikekwe, ndị sayensị n’azụ ya.
Ha chọrọ ka ndị mmadụ nweta ohere ịnweta mmanụ CBD dị oke mma, ọ bụ ya mere ha ji na-ekwu na ọ bụ nke iwu. Ọ bụ iferi na ahịa ire ere. Ọ bụ ihe ịtụnanya na-adịkarị n'anya na ịzụ ahịa, n'ihi na iwu abụghịkarị ihe ruru eru ị na-anya isi. Ma na nke a, enwere ike.
Na ego ole data dị na ya? Ọ dị mma, nke a bụ ezigbo eserese, anyị ga-aga ụdị nke njedebe na… chere, mba. Anyị ga-akwụsị ngalaba a site na ụta Richard Nixon, tufuo ihu ọjọọ ya na ihu ọjọọ. Mana tupu nke a, ka anyị kwuo maka ole mmanụ mmanụ CBD gbawara n'ụzọ…
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ma ihe ewu ewu, ị nwere ike ịhụ ihe ọ na-achọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe agbanweela ka oge na-aga, nke a bụ omume. Onwere uzo ato anyi anyi ga aga. Aga m etinye nke a ugbu a. Ga-ahụ na ọ na-acha anụnụ anụnụ, odo na-acha ọbara ọbara, na-acha ọbara ọbara na-ewepụ. Kedu ihe bụ ọbara ọbara? Ka anyị buru ụzọ gafee ihe na-acha anụnụ anụnụ.
Acha anụnụ anụnụ dị ebe ahụ na ala, isi ala, nke ahụ bụ hemp. Ma dịka i si hụ, hemp agaghị aga ebe ọ bụla. Na nke dị n’elu ya, nke ahụ bụ ahịrị uhie ahụ kpuchie, ọ dị ka ọ chiri azụ na February nke 2017, nke ahụ bụ afọ.
Ma dị ka ị pụrụ ịhụ, cannabis bụ ụzọ a ma ama karịa hemp, mana ọ nweghị ebe a na-ahụkarị dịka cannabidiol a, aka CBD dị. Lee ya anya. Ọ malitere laa azụ naanị afọ anọ gara aga ma ọ bụ karịa, ọ dịkwa ka ihe a na-anụbeghị, na dịka amaghi ebe niile, dịka hemp. Ma yɛnhwɛ nsɛm a esisii.
Dika ndi mmadu na aghota ihe banyere CBD na ogwu marijuana na oke igbo-eji marijuana na igbo na-abawanye ụba. Ọfụma, n’ikpeazụ, ihe nzuzu, ihe nzuzu nwoke a mere na 1970 iji jide n’aka na agụnyere hemp na Iwu Nchịkwa, ma ewezuga mkpụrụ ya, eriri ya ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ igba ogwu, ga-emesị mezighi.
Ehee, akpọrọ m gị asị, Richard Nixon. Nke a bụ gị mmejọ gị.
Onye ọka iwu Cannabis na-ewere gị CBD Ajụjụ gbasara Iwu Hemp Iwu
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko jụọ ha na nkwupụta ma ọ bụ gaa na cannabisindustrylawyer.com wee pịa bọtịnụ ịkpọ anyị. Ruo mgbe m hụrụ gị oge ọzọ, cheta, debe ya n'ụzọ iwu.